China Oriọna Top 20w China Manufacturers & Suppliers & Factory
Oriọna Top 20w - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Oriọna Top 20w)
Anyị 300W Dugara Street Light ndi isi bụ 130LM / W na a 300W Dugara Street Light Oriọna nwere ike na-anọchi HPS / zoro 10 00 watt. Ụlọ Led Street Light Housing bụ udu mmiri na-acha ọla kọpa na ọla kọpa. Nke a mere ka e nwee ìhè imepụta okporo ámá bụ iji dochie ihe mgbakwasị chaa chaa chaa chaa na ip65 mmiri. 300W mere...
Gburugburu Uhie Na-ekpuchi Elu Elu 20W Njirimara: 1. Nchebe ndi mmadu na ndi mmadu, ndi mmadu nwere ike ime gburugburu ebe obibi. 2.Otu jijiji, mgbochi mmiri, enweghị ntighari, enweghị ihe ọkụ, na-echebe anya gị. 3.N'iko siri ike ma kwụsie ike, ọ dịghị ụgwọ ọrụ ọ bụla. 4.Ibu akwa ibe ya. 5.100% Ngwongwo na-agbanye...
Anyanwụ weere ìhè 20W Nkọwaputa: 1) Isi Iyi: SMD3030 2) Mmiri dị ebube: 150Lm / w 3) Akara Akara Akara: 20W 4) Isi: 2 Pin waya 5) Ogwe ihu: 120 ° 6) Certi.:CE,ROHS 7) IP Rating: IP65 8) Akwụkwọ ikike: afọ atọ Njirimara: 1. Nchebe ndi mmadu na ndi mmadu, ndi mmadu nwere ike ime gburugburu ebe obibi. 2.Otu jijiji,...
20W niile n'ime otu ìhè ìhè post Nkọwaputa: 1) Isi Iyi: SMD3030 2) Mmiri dị ebube: 150Lm / w 3) Akara Akara Akara: 20W 4) Isi: 2 Pin waya 5) Ogwe ihu: 120 ° 6) Certi.:CE,ROHS 7) IP Rating: IP65 8) Akwụkwọ ikike: afọ atọ Njirimara: 1. Nchebe ndi mmadu na ndi mmadu, ndi mmadu nwere ike ime gburugburu ebe obibi....
weghaara oghere post 20W ìhè Njirimara: 1. Nchebe ndi mmadu na ndi mmadu, ndi mmadu nwere ike ime gburugburu ebe obibi. 2.Otu jijiji, mgbochi mmiri, enweghị ntighari, enweghị ihe ọkụ, na-echebe anya gị. 3.N'iko siri ike ma kwụsie ike, ọ dịghị ụgwọ ọrụ ọ bụla. 4.Ibu akwa ibe ya. 5.100% Ngwongwo na-agbanye ala...
Oriọna Top 20w Oriọna Top 20W Okpuru ọka di 100w Oriọna Light Lightwulu 150w Kpoo oriọna Led Corn Lamp 120w Ejiri oriọna Ejiri ihe dị ka 3000lm 20w